Tonga manam-pahaizana momba ny fanapahana sy ny cyber | Avy amin'ny Linux
Luigys toro | | GNU / Linux, soso-kevitra
Ny mpamaky rehetra an'iLinux dia tokony hazava ny dikan'ny hoe «mpijirika», satria ny sakaizantsika ChrisADR tsy nanazava azy ireo tamin'ny antsipiriany tao amin'ilay lahatsoratra Inona no tena dikan'ny "mpijirika", ny fikorontanana naterak'ity lahatsoratra ity, nanampy ny fitsidihana marobe tonga taminay nitady vaovao momba ny Fijirihana sy fiarovana cyber, miaraka amin'ny traikefa sarotra niarovanay ireo mpizara anay manokana, dia manana anay "voatery" manandrana amin'ny fomba rehetra handanjalanjana sy hianarana bebe kokoa momba ity faritra mahaliana ity.
Tokony hataontsika mazava tsara izany "Tsy tanjonay ny hampiasana ny fahalalana hacking sy ny fanapotehana ny olona rehetra", ambony ambany, Tianay ny mpampiasa anay sy izao tontolo izao amin'ny ankapobeny mba afaka mianatra teknika sy foto-kevitra mamela azy ireo hiaro tena amin'ny fanafihana manimba, na tsy fahombiazany manana ny fahaizany mamorona politika fiarovana izay manampy azy ireo hanafoana ny mety ho fanafihana.
Tsy manam-pahaizana manokana ao amin'ilay faritra aho, fa raha efa niasa efa ela tany faritra anaovana fahamatorana lehibe ny filaminan'ny solosaina, Izaho koa tsy maintsy mitantana protokol fiarovana ho an'ny mpanjifako, fa ambonin'izany rehetra izany dia eo amin'ny sehatra fandaharana no nifantohako mamorona sy mampihatra teknika hanaovana izay hampisy filaminana ireo fampiharana. Midika izany fa izany rehetra izany dia mifanohitra amin'izay eritreretin'ny olona, ​​ny teknikan'ny fanapahana, na tsotra sy be pitsony toa inona izy ireo, dia mety hisy fiatraikany tsara isan'andro isan'andro, ahafahantsika manana solosaina sy programa azo antoka kokoa, misoroka imbetsaka amin'ny voahitsakitsaka ny fiainantsika manokana, ary miantoka ny tsy fivadihan'ny angon-drakitra.
Aorian'ireo voalaza etsy ambony ireo dia tsy tokony ho tsiambaratelo ho an'ny iray amintsika izay tokony hataontsika Mianara tsara momba ny fanapahana hack sy ny cyberAtaoko io, lalana mahafinaritra sy hafahafa io, fa ambonin'ireo lalana rehetra izay midika fahamatorana sy torolàlana sahaza mba tsy hiafara amin'ny fampiasana teknika izay tsy ny tena soso-kevitra. Nanomboka tamin'ny famakiana niparitaka be aho, saingy nahavita nianatra izay heveriko fa mifanaraka amin'izany Fianarana hacking etika feno, ity fampianarana ity dia nahafahako nanana fahalalana matanjaka momba ny foto-kevitra, ny fenitra ary ny fenitra izay tanterahina isan'andro isan'andro amin'ireo faritra ireo, ho fanampin'ny fitarihana ahy mamorona laboratoara manokana itadiavako ireo marefo sy fandrahonana izay andramako apetaka miaraka amin'ireo teknika nampianarina ahy tao amin'ilay Mazava ho azy.
Ny coupon dia hihetsika manomboka amin'ny 6 Janoary 2018
Ny coupon dia nanova ny taha fihenam-bidy mifototra amin'ny fiakaran'ny vidiny tany am-boalohany nataon'ny mpamorona taranja. Na inona na inona vidiny, dia nampanan-karena ny fampianarana ny fanavaozana vaovao
Toy ny tamin'ny taranja teo aloha, nahavita nahazo tapakila aho mba hahafahan'ny mpampiasa DesdeLinux mahazo an'io fampianarana io amin'ny vidiny manokana afaka 7 andro, aorian'io rohy ho afaka mankafy maharitra ny fampianarana miaraka amin'ny fihenam-bidy 90% 75% . Toy izany koa, nanapa-kevitra ny hanao famerenana amin'ny antsipiriany momba ilay Mazava ho azy aho mba hananantsika hevitra momba izay ho tratrarintsika sy ny fiheverako manokana momba ny atiny, ny firafiny, ny fomba fianarana, ankoatry ny hafa.
1 Fampidirana ny fanapahana hacking sy ny cyber.
1.1 Fampahalalana teknika momba ny fampianarana
1.2 Momba ny mpampianatra sy ny fomba fianarana
2 Fehiny manokana
3 Fampianarana mifandraika amin'ny fanapahana sy amin'ny cyber
Fampidirana ny fanapahana hacking sy ny cyber.
Fampahalalana teknika momba ny fampianarana
Ity dia ity ahitana horonantsary 104, izay miampy mihoatra ny 16 ora ny filalaovana playback, miaraka amina antontan-taratasy midadasika, rehetra amin'ny teny espaniola ary natodika tany a ampahibemaso amin'ny sehatra fanabeazana rehetra. izay manolotra mari-pankasitrahana momba ny fahavitana, ny fidirana amin'ny Mazava ho azy fa avy amin'ny Udemy Platform izay azonao idirana avy amin'ny mpitety tranonkala rehetra ary koa manana Fampiharana Android sy Ios.
Ity fampianarana ity dia teôlôjika 100% - azo ampiharina, misy torolàlana momba ny fanoroana maro, ka mandritra izany dia hianaranao teknika fa hampihatra izay nianaranao koa, ny fizarana tsirairay dia misy fampisehoana sy fitaovana manampy azy ireo.
Momba ny mpampianatra sy ny fomba fianarana
Eduardo Arriols Nuñez mampianatra antsika mazava sy mazava momba ny fanapahana hacking sy ny cyber amin'ny alàlan'ny asany Fampidirana ny fanapahana hacking sy ny cyber, miaraka amin'ny ohatra aseho amin'ny sary sy amin'ny tena fampisehoana amin'ny tontolo voafehy sy tsy voafehy, mandritra ny fampianarana dia manome torohevitra mahasoa antsika, ho fanampin'izany ny fampianarana amin'ny ankapobeny dia manana vondrom-piarahamonina mavitrika tokoa mizara vaovao izay nohamarinin'ny mpampianatra.
Ity fampianarana ity dia mizara ho enina enina izay mitodika toy izao
Fizarana 1: Ity dia singa iray mikendry mazava hanome ny sombin'ilay taranja, hampiditra foto-kevitra fototra ary, ambonin'izany rehetra izany, manome toro-hevitra maro araka izay azo atao izay hahafahanao mahazo ny tsara indrindra amin'ilay taranja.
Unit 2: Amin'ny alàlan'ny horonantsary 6 amin'ny 10 minitra eo ho eo, fampidirana tena mahaliana momba ny fanapahana etika sy ny fiarovana amin'ny Internet no omena antsika, izay hampianarina antsika ny hevitra momba ny fiarovana sy ny fanaraha-maso, ho fanampin'ny fanomezana fiofanana ilaina anay hahafahana mamakafaka karazana sy fantsom-panafihana, fiarovana sy fitaovana fiarovana.
Fizarana 3: Ny singa fahatelo dia ahafahantsika mianatra mamorona laboratoara fanandramana manokana, izay ivon-toerana mahaliana antsika ny fanaovana virtoaly ny milina mpanafika sy marefo, ho fanampin'izany Eduardo dia manome fanadihadiana lehibe momba ireo fizarana lehibe natao ho an'ny fanapahana etika ary mampitandrina antsika momba ireo fa manana karazana marefo izy ireo (natao hianarana ny hanaiky lembenana amin'ny rafitra sy serivisy).
Unit 4: Ahoana no ahafahantsika manantena ny distro izay atolotry Eduardo hianarana sy hananana tombony betsaka amin'ny hacking Ethical dia ny Kali Linux, noho izany ao amin'ny andiany faha-efatra dia ampianarina antsika amin'ny fomba lalina ny fikirakirana ny rafitra fiasa, ireo fitaovana lehibe misy amin'ity distro ity dia fantatra, isika dia omena fiofanana tsara amin'ny fampiasana ny console ary ampianarina izahay hampivelatra ny script bash ho an'ny automatisation des activations.
Unit 5: Ny singa fahadimy dia miompana amin'ny tsy mitonona anarana amin'ny Internet, izay ahalalana mazava tsara tsara amintsika ny fampidirana sy andian-dahatsoratra fototra mifandraika amin'ny fampiasana ireo tamba-jotra tsy fantatra anarana, amin'ny fomba mitovy amin'izany, ampianarina antsika hametraka sy hampiasa fitaovana tsy fantatra anarana toa ny TOR , FreeNet, l2P, proxy momba ny fivezivezena, serivisy VPN ary farany nefa tsy kely akory dia ampianarina hahay hamorona sehatra fanaingoana manokana isika.
Fizarana 6: Ny farany amin'ireo singa dia manomana antsika amin'ny tontolo sarotra sy tena izy, izay iatrehan'ny fahalemena isan'andro ary raha tsy misy ny rafitra fiarovan-tena mety hahatonga antsika ho voakasik'izany, dia hianatra ny fomba fiasa mifanohitra amin'ny Teknolojia Sosialy sy ny protokolola ampy hizarana vaovao izahay. amin'ity fomba ity, hahafahantsika mamantatra sy mitrandraka fahalemena marobe miaraka amin'ireo teknika sy fitaovana ampianarin'i Eduardo hampiasainay. Ity singa ity no lehibe indrindra amin'ny rehetra ary manana kilasy 65, izay amin'ny fomba feno amin'ny an-tsipiriany no hahalalanao ireo faritra saro-bidy indrindra mifandraika amin'ny fanapahana etika.
Ireo singa ireo dia manolotra karazana horonan-tsary sy antontan-taratasy isan-karazany izay mifameno amin'ny tsirairay amin'ny fianarana, miaraka amin'ireo fitsapana izay tena mampiseho ny fahaiza-manao azo, tsy misy isalasalana fa làlana tsara hanombohana amin'ity tontolon'ny fanapahana sy filaminana cyber ity.
Raha manam-pahaizana momba ny fanapahana sy ny fiarovana cyber ianao, amin'ity taranja ity dia hahazo fototra ara-teknika afaka hamerina hamerina ny fahalalanao ianao, hahafahanao manamarina ireo teknika izay mety tsy fantatrao koa ary hanana ny mety hifaneraserana ianao. ireo mpianatra 700 mahery izay nisoratra anarana tamin'ity traikefa nahafinaritra ity.
Ny fisongadinana iray dia ny hoe 'velona' ny fampianarana. Midika izany fa hampidirina isam-bolana ny horonan-tsary vaovao, noho izany, hiakatra ny vidin'ny fampianarana ho an'ireo mpianatra vaovao. Ho an'ireo mpianatra rehetra efa nahazo ny taranja teo aloha dia hanana fidirana tsy voafetra amin'ireo atiny vaovao novokarina izy ireo.
Ary farany, ny fampidirana ny fampianarana dia azo jerena ao amin'ny horonantsary fampidirana izay ao amin'i Udemy, antenaiko fa hahasoa anao izany ary hanararaotra ny cupón mba hahafahan'izy ireo manangona vola raha toa ka maniry ny hahazo izany izy ireo, satria amin'ny ankapobeny ny vidin'ny fampianarana dia 120 $ ary miaraka amin'ny fihenam-bidy 10,99 $ 29,99 $.
Fampianarana mifandraika amin'ny fanapahana sy amin'ny cyber
izahay izao dia manao fampianarana mifandraika antsoina Fampidirana ny fanapahana hacking sy ny cyber, dia misy horonan-tsary 56, mitontaly mihoatra ny 8 ora ny famerenana, miaraka amin'ny pejy 250 misy fampahalalana amin'ny antsipiriany, amin'ny teny Espaniôla rehetra ary mikendry ny mpihaino ny sehatra fanabeazana rehetra. Manana fanadinana 7 zarain'ny ambaratonga izy ity ary manolotra taratasy fanamarinana ny fahavitana ... Nahazo tapakila ihany koa izahay fa nanantena ny hizara izany tsy ho ela amin'ny lahatsoratra iray hafa, ho an'ny maika sy hanampy anao amin'ny fampiofanana, Eto nandao ny rohy ny tapakila amin'ity fampianarana ity dia mitentina $ 10,99.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » soso-kevitra » Lasa manam-pahaizana momba ny fanapahana sy ny cyber
Juan Martin dia hoy izy:
Toa tsy mandeha ny tapakila fihenam-bidy. Manolotra fihenam-bidy 75% ho antsika izy ary hijanona eo amin'ny 29,99 euro ... toy ny olona hafa niditra tsy nisy tapakila.
Valiny tamin'i Juan Martin
Salama, azafady, nifandray tamin'ny ekipan'ny Udemy aho ary hanan-kery manomboka amin'ny rahampitso ny tapakila, ka azafady fa tsy nisy izany androany ... Mandrakizay aho hamela naoty ao amin'ilay lahatsoratra ary ny ampitso dia hanaovako izany havaozy indray rehefa mandeha ny tapakila ..
adrian abadin dia hoy izy:
Mbola tsy mandeha
Mamaly an'i adrian abadin
Nohavaozinay ny lahatsoratra tany am-boalohany tamin'ny fanovana sy tolo-kevitra ilaina, indrisy fa noho ny antony tsy voafehinay, ny coupon dia afaka manome fihenam-bidy 25% fotsiny ka $ 29,90 no vidiny ... Toy izany koa, mazava kokoa isika ao amin'ny maneho hevitra ary nanampy coupon ho an'ny taranja mitovitovy amin'izany.
Miala tsiny aho AMigo, avy any Venezoelà aho ary liana amin'ilay fampianarana saingy tsy mila mandoa izany vola izany aho.
Hector Padró dia hoy izy:
Mandoto ianao, mifidiana an'i Maduro.
Valiny tamin'i Héctor Padró
anti mena dia hoy izy:
Ho an'ireo sisa tavela aminay, ireo mpangataka an'izao tontolo izao.
Mamaly fanoherana ny mena
cd dia hoy izy:
Avy any Venezoelà koa aho fa tsy azoko hoe inona no tadiavin'ny fanehoan-kevitra.
Ry malala maraina! Tsindrio ny rohy sy ny habeny ary tsy hita ilay fihenam-bidy voalaza fa te hanao an'ity fampianarana ity aho.
ANGEL SATO Arevalo dia hoy izy:
Manana karatra manana ny habetsany eo ho eo aho, saingy toa tsy mandeha ny tapakila.
Valiny amin'i ANGEL SATO Arévalo
Gertrude dia hoy izy:
Ry malala, manana hevitra ve ianao amin'ny fotoana hiasan'ny coupon? Misaotra betsaka.
Valiny tamin'i Gertrudis
Tsy mbola hita ny tapakila fihenam-bidy
Yoan dia hoy izy:
Misaotra betsaka amin'ny lahatsoratra !!!!! Azafady azafady ampahafantaro anay anay hoe rahoviana no hisy ny fihenam-bidy? mahafaly
Valio i Yoan
Linuxita dia hoy izy:
Ao amin'ny lahatsoratra dia milaza fa ny fihenam-bidy dia 90% fa raha ny tena izy dia 75% .. 🙁
Mamaly an'i Linuxita
Deivi dia hoy izy:
miarahaba an'i Linuxita,
Mpampiasa udemy aho nandritra ny taona vitsivitsy ary matetika dia mametraka fihenam-bidy samihafa izay manomboka amin'ny 50% ka hatramin'ny 90%. Raharaha miandry ny famerenana ny tolotra 90% raha tsy afaka mandoa ny tena vidiny na ny fihenam-bidy 75% ianao.
Valiny tamin'i Deivi
AlbertoC dia hoy izy:
salama manao ahoana ny fahasalamanao
Vao nividy taranja java tany Udemy aho ary mieritreritra ny hividy ny taranja hacking etika koa, fantatrao ve raha raisina matetika ny tolotra, na raha mifarana amin'ny andro lazain'ny pejy na raha maharitra andro vitsivitsy izy ireo ?
Mamaly an'i AlbertoC
rarmando dia hoy izy:
Aiza no ahitako ny tapakila ka $ 10.99?
Mamaly an'i rarmando
alvar dia hoy izy:
Salama, mahalala vaovao momba ny tapakila ve ianao?
Mamaly an'i alvar
Jorge Perez dia hoy izy:
Toa mahaliana ilay taranja, saingy tsy mety na tsia ilay kaody.
Valiny tamin'i Jorge Perez
Angamba raha nomenao anay ny kaody coupon dia azonay ampiasaina… 🙂
Pruden dia hoy izy:
Handefa ny kaody coupon ve ianao hahafahanay mampiasa azy?
Valiny tamin'i Pruden
Mahafantatra zavatra momba ny tapakila ve ianao?
Ry zalahy efa nanamarina aho fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny tapakila, nanoratra imbetsaka tamin'ilay tompon'andraikitra hanome ahy ny fampiroboroboana izahay ao Udemy, indrisy fa miala sasatra any Kiobà izy miaraka amin'ny fifandraisana kely ... Raha vao rehefa ahitsy ny tapakila dia handefa tsindry vaovao aho mba ho fantatry ny tsirairay ary hamaly ny tsirairay amin'ireo liana aho mba hahazoany fampandrenesana ...
Miala tsiny aho fa tsy mandeha tsara ny tapakila, ary antenaiko fa afaka mandray soa sy miditra amin'ny làlana tsara toy izany amin'ny vidiny mirary tokoa ianao.
Misaotra betsaka anao amin'ny fampahalalana Lagarto. Manantena ny tapakila voalaza izahay !!!!
skynet29 dia hoy izy:
Misaotra, hijery aho.
Mamaly an'i skynet29
Jeff dia hoy izy:
Fa ny coupon dia mihatra amin'ny tolotra ankehitriny sa coupon misaraka no mamela anao fihenam-bidy 90% ???
Valiny tamin'i Jeff
Miaraka amin'ny tapakila, ny vidin'ny fampianarana dia $ 10.99
ok ary amin'ny andro eo ho eo, rahoviana no mivoaka ny tapakila ??? ary Grax
Raloas dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, mbola tsy hita ny fihenam-bidy 90%. Liana aho handray io taranja io. Azonao ampahafantarina ahy ve rehefa afaka manome izany izahay? Hiandry aho, fa raha sanatria. Ny fampianarana izay miseho eo amin'ny pejy udemy misy fihenam-bidy 90% sy sanda 10,99, dia iray amin'ireo adiny 25, amin'ny teny anglisy.
Mamaly an'i Raloas
Te hanana tapakila aho raha liana amin'ilay Mazava ho azy fa tsy zakako ny tena vidin'ity fampianarana ity 🙂
Tairosonloa dia hoy izy:
Miandry ny tapakila ihany koa aho (:
Valiny tamin'i Tairosonloa
Riquelme dia hoy izy:
Hea mahazo milahatra ihany koa aho amin'ny tapakila izay toa tsara ny fampianarana 😉
Misaotra anao ary manararaotra miarahaba anao amin'ny bilaogy aho, izay tena tsara, na dia volo sy tsy manoratra hevitra aza aho.
Fiarahabana avy amin'ny Bielefeld !!!
Valiny tamin'i Riquelme
Ry zalahy nahazo valiny ihany izahay tamin'ny farany momba ny tapakila izay natolotra antsika mba hahafahan'ny mpampiasa desdelinux miditra amin'ny làlana 10,99 $ 30, indrisy fa tsy afaka ampiasaina ireo kuponany ankoatry ny $ 75 isaky ny Mazava ho azy fa raha lazaina, fihenam-bidy XNUMX%, izany satria ny mpampiasa namorona ny Mazava ho azy dia nampitombo ny taham-pahaizany ary ny sehatra dia mamela an'io farafahakeliny io ho faran'izay kely indrindra (Manenina aho fa nitranga izany). Ny mpiasa ao Udemy dia nanandrana nanatratra ny mpampiasa mba hahazo fifanarahana, saingy toa tsy namaly izany noho ny fialan-tsasatra nataony.
Ankehitriny izahay dia manao fampianarana mifandraika antsoina Fampidirana ny fanapahana hacking sy ny cyber, dia misy horonan-tsary 56, mitontaly mihoatra ny 8 ora ny famerenana, miaraka amin'ny pejy 250 misy fampahalalana amin'ny antsipiriany, amin'ny teny Espaniôla rehetra ary mikendry ny mpihaino ny sehatra fanabeazana rehetra. Manana fanadinana 7 zarain'ny ambaratonga izy ity ary manolotra taratasy fanamarinana ny fahavitana ... Nahazo tapakila ihany koa izahay fa nanantena ny hizara izany tsy ho ela amin'ny lahatsoratra iray hafa, ho an'ny maika sy hanampy anao amin'ny fampiofanana, Eto nandao ny rohy ny tapakila amin'ity fampianarana ity dia mitentina $ 10,99.
Toy izany koa ity taranja ity dia lafo vidy, satria Paco sepulveda mampianatra antsika mazava sy mazava momba ny fanapahana hack sy ny fiarovana amin'ny Internet, miaraka amin'ny ohatra misy ohatra sy fampisehoana tena izy amin'ny tontolo voafehy sy tsy voafehy.
renirano zaf dia hoy izy:
Fantatrao raha mbola miasa ny tapakila fihenam-bidy? '
Mamaly an'i zaf renirano